Youtube TV vs Hulu Live (2020) - Iza amin'ireo no serivisy tsara indrindra? - Fialam-Boly
YouTube TV sy Hulu Live dia roa amin'ireo safidy mahazatra indrindra amin'ny tariby. Ny serivisy fahitalavitra dia natomboka tamin'ny taona 2017 ary manana fanangonana mahavariana ireo fantsona eo an-toerana.Youtube Tv sy Hulu Live dia sehatra fanaovana streaming video ho an'ny tanjona fialamboly.
YouTube TV sy Hulu Live dia manana fanangonana seho am-boalohany sy laharana fantsona tokana.Ny safidin'ny fanatanjahantena YouTube TV dia tsara kokoa noho ny Hulu Live, fa ny Hulu Live TV dia manana fantsona vaovao sy fantsona fialamboly mahafinaritra.
Raha ny atiny tany am-boalohany no jerena, YouTube TV dia manana fanangonana kely kokoa noho ny an'i Hulu. Na izany aza, ny Hulu Live dia manana atiny kalitao isan-karazany. Tsy misy mpandresy mazava eto, mila misafidy mifototra amin'ny karazana atiny tianao ianao.
Ka ny Hulu Live na ny fahitalavitra YouTube no tsara kokoa ho anao?Samy tsy mitovy izy roa ankoatry ny vidiny ary koa ny isan'ny fantsona, fa azonay antoka fa hianaranao eto ny tena maha samy hafa azy ary ny serivisy mivantana amin'ny fahitalavitra mivantana no mety aminao.
Miaraka amin'ny fahitalavitra YouTube sy Hulu Live, mahazo izay aloanao ianao.Ireo sehatra roa ireo dia anisan'ny miaina tsara indrindra sehatra mivantana misy anio ary samy atoro azy roa izy ireo. Samy miasa ho toy ny solon'ny TV tariby ary mendrika hodinihina manokana ho an'ireo mpanapaka tariby.
Youtube TV vs Hulu Live - Fampitahana amin'ny antsipiriany
YouTube TV sy Hulu Live dia misy fahasamihafana be eo amin'ny fantsona. YouTube TV dia manome mpampiasa manodidina ny fantsona 67 avy amin'ny fantsona 100 ambony isaky ny serivisy, raha 58 kosa ny fantsona Hulu.Na eo aza izany, ireo sehatra roa ireo dia mizara fantsona malaza izay ahitana Cartoon Network, Disney Channel, ESPN, Fox News, TBS, USA Network, sy maro hafa.
Tsotra be ilay interface YouTube TV. Manana kiheba Home, Library ary Live TV ianao, izay hamela anao handamina ny seho mivantana sy handrakitra atiny, na hijery zavatra efa noraketinao tao amin'ny DVR.
Azonao atao koa ny mampiasa ny asan'ny fikarohana amin'ny takelaka misy anao, amin'izay hahitanao izay tadiavinao.Ny asan'ny DVR dia ahafahanao mirakitra fahitalavitra tsy voafetra, saingy sivy volana eo ho eo no azonao itahirizana ny rakipeo.
Hulu's Live TV interface dia manana fomba fijery miorina amin'ny grid. Azonao atao ny mizaha ireo seho misy izay misy ao amin'ny Hulu na mijery amin'ny sarimihetsika sy fandaharana izay efa noraketinao.Izy io dia manana fijerena varavarankely lehibe izay manamora ny fitadiavana izay tianao hojerena nefa tsy mila mandamina pejy misy atiny.
Youtube Tv Vs Hulu Live - Fitaovana tohanan'ny
Raha vao nanomboka ny YouTube, dia fitaovana vitsivitsy ihany no nanohana azy. Niova tsy ho ela anefa izany.Ankehitriny dia azo alaina amin'ny boaty Roku, Apple Tv, Google Chromecast , Firestick sy TV, fitaovana Android sy TV mandeha amin'ny TV Android, Xbox One, fitaovana iOS, Apple TV amin'ny alàlan'ny AirPlay, ary fahitalavitra marani-tsaina avy amin'ny LG sy Samsung.
Hulu Live TV dia misy amin'ny fitaovana Android, Apple TV, LG Smart TV, Macs, Amazon Fire TV, ary Afo fahitalavitra afo , PC, Rokus, Chromecast, fitaovana iOS, ary ny Xbox One.Hulu ihany koa no mpanome tolotra tokana azo alaina ao amin'ny console Nintendo Switch azo entina.
YouTube TV vs Hulu Live - Vidiny
Raha ny vidiny, ny TV TV dia nampiakatra ny vidiny ho $ 65 / volana. Noho izany, Hulu + Live, izay mitentina $ 55 / volana no mahazo tombony eto satria mora kokoa noho ny YouTube Live.Raha mitady fihenam-bidy na drafitra isan-taona ianao, dia tsy misy an'izany ireo tolotra fihenam-bidy na drafitra fanao isan-taona, noho izany ny Hulu Live sy ny TV YouTube dia mitovy raha ny tahiry no resahina.
Samy manome fe-potoana fitsapana maimaimpoana na Hulu na YouTube TV.Ny Hulu + Live TV dia ahitana ny tohanan'ny doka fototra, izay azo esorina amin'ny fandoavana $ 6 / volana fanampiny.
Ary koa, mba hamboarina ny drafitrao amin'ny DVR nohatsaraina sy ny efijery tsy voafetra, ny drafitra Hulu Live dia mety mitaky $ 15 / volana fanampiny ambonin'izany.
Youtube Tv Vs Hulu Live - Endri-javatra
Ny TV YouTube dia mitentina $ 64,99 isam-bolana raha toa ka $ 54,99 isam-bolana ny Hulu Live (miaraka amin'ny doka) ary raha tsy mila doka ianao, dia handany $ 60,99 isam-bolana.
YouTube TV dia manana fe-potoana fitsapana 14 andro maimaim-poana. Hulu Live dia manana fotoam-pitsarana 7 andro na misy doka na tsia.
YouTube TV dia manana fantsona 85+ isan-karazany ary Hulu Live dia manana fantsona 65+.
Ny fivarotana Cloud DVR amin'ny YouTube TV dia tsy misy fetrany izay miasa tsara koa. Saingy, ao amin'ny Hulu Live dia manodidina ny 50 ora amin'ny vidiny $ 55. Azonao atao ny manatsara ny fahafaha-mitahiry DVR amin'ny alàlan'ny fandoavana vola $ 10 fanampiny.
Misy manodidina ny 3 ny riaka miaraka amin'ny fahitalavitra YouTube. Saingy, ao amin'ny Hulu Live dia tsy misy afa-tsy 2. Azonao atao ny mandoa Hulu manodidina ny $ 10 fanampiny isam-bolana ary hanatsara ny isan'ireo renirano tsy voafetra ihany koa ianao.
Ny safidy hijerena ivelany dia tsy misy amin'ny fahitalavitra YouTube fa misy ao amin'ny Hulu Live tsy misy doka.
YouTube TV sy Hulu Live samy manana doka. Saingy, ao amin'ny Hulu Live, raha mandoa vola fanampiny ianao dia azonao esorina ireo doka. Na izany aza, tsy azonao esorina amin'ny fahitalavitra YouTube izany. Azonao atao ny miala amin'ny doka.
Hulu Live dia manana fampisehoana manokana momba azy ary somary tsy mitovy amin'ny an'ny fahitalavitra YouTube izy ireo.
Azonao atao ny manangana piraofilina ho an'ny mpampiasa isan-karazany ary mametraka koa ny fikiranao manokana Taste Picker ary hitahiry ny atiny ao amin'ny faritra My Stuff. Ireo mpampiasa azy koa dia afaka mankafy sy tsy tia fandaharana sy sarimihetsika izay manampy an'i Hulu Live hifanaraka amin'ny safidinao. Raha tsy afa-po amin'izay lazain'i Hulu anao ianao dia azonao atao ny misafidy ny tsy handray sosokevitra avy amin'ny mpanome tolotra intsony.
Ny interface sy ny menus amin'ny sehatra roa dia samy hafa amin'ny iray hafa ary amin'ny tariby mahazatra.
YouTube dia mamela ny mpanjifany hitantana ny fitarihany na dia misafidy aza - abidia na clustering isan-karazany (fanatanjahan-tena, vaovao na sarimihetsika, sns ..) etsy ankilany, Hulu dia manana tabilao My Channels ahafahanao mitahiry ireo tianao indrindra.
Mora tantana ny torolàlana YouTube raha toa ka somary sarotra ny torolàlana an'i Hulu.
Endri-javatra mahavariana iray izay atolotry ny mpanome tolotra dia ny fahafaha-mitady ekipa fanatanjahantena ankafizinao ary avy eo ampidiro amin'ny rakipeo DVR izay hanampy anao hanana ireo lalao farany indrindra amin'ny filaharanao.
Raha mitady hanapaka ny tadiny amin'ny tariby ianao ary miankina amin'ny sehatra streaming amin'ny Internet ho an'ny fahitalavitra mivantana dia azonao antoka fa hahazo izay ilainao amin'ny YouTube TV na Hulu Live. Ireo mpanome tolotra toy ny YouTube TV sy Hulu Live dia nanome serivisy ambony ho an'ireo mpampiasa azy amin'ny vidiny mirary.
YouTube TV no tsara indrindra ho an'ireo mpijery izay maniry faran'izay betsaka ny vidiny lafo indrindra, fa ny Hulu Live kosa mety ho an'izay liana amin'ny fanangonana ny fahitalavitra mivantana sy ny tolotra mivantana on-demand.
Raha liana amin'ny vaovao na ny atiny Hulu tany am-boalohany ianao, dia angamba ho anao Hulu Live dia mety ho somary tsara kokoa, fa ho an'ny olona iray izay manao fanatanjahan-tena bebe kokoa dia azo antoka fa ny TV YouTube no ho tsara indrindra. Raha mbola tsy azonao antoka ianao ary manana karazana fisalasalana momba ny serivisy roa ary tsy afaka misafidy iray, dia ampiasao fotsiny ireo fitsapana maimaimpoana avy amin'ny tsirairay amin'ireo mpanome tolotra ary jereo ho anao!
U tranokala mozika nblocked - Henoy ny mozika na aiza na aiza
ps4 miampy code fanavotana maimaimpoana
avy amin'ny tranonkala aiza no ahafahako misintona sarimihetsika
maimaim-poana amin'ny aterineto sarimihetsika mivantana tsy Downloads
www.youtube-mp3.org hampiova finoana horonan-tsary
www jereo ny andian-tsarimihetsika amin'ny Internet maimaim-poana
mijery sarimihetsika an-tserasera maimaimpoana maimaim-poana tsy misoratra anarana